Home Somali News Somaliland: Beesha Caalamka Oo Xukumadda Somaliland Markale Luuqad Adag Kula Hadashay, Kana...
Beesha Caalamka ee Somaliland ka taageerta Arrimaha doorashada iyo horumarka ayaa sheegtay in haddii dib u dhac doorasho oo aan ahayn dhinaca farsamadu yimaado ay wiiqmi doonto kalsoonida guud iyo tan beesha caalamkaba .
Qodobo ay si wada jir ah u soo saareen xubno metalaya beesha caalamka iyo guddida jihaynta Dimuqraadiyaynta ayaa lagu sheegay inay ay beesha caalamku ku farxasantahay go’aankii ay guddiga doorashooyinka Somaliland ku muddeeyeen xilliga ay diwaangalintu qabsoomayso.
Bayaankan ay soo saareen xubnaha metalaya beesha caalamka iyo guddida jihaynta Dimuqraadiyaynta inay kulan la yeesheen dhinacyada siyaasadda Somaliland isku haya .
Dawladdaha iyo ururada qaybta ka ah Bayaankan oo ka soo baxay Xafiiska Hay’adda DANIDA ee Hargeysa waxaa ka mid ah Qaramada midoobay, Ingiriiska, Denmark, Maraykanka, Sweden, Switzerland iyo Australia.
Hadaba warsaxafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka oo nuqul ka mid ah soo gaadhay Shabakada Tooshnews.net ayaa u dhignaa sidan :
Ujeeddo: Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxtooyada ee Soomaalilaan.
Bulshada Caalamku waxa ay soo dhawaynaysaa muddaynta ay sameeyeen guddida doorooshooyinka qaranka Soomaaliland in ay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyuhu iyo xilliga dooroshooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ee june 01-2016. Waxa aannu ku ammaanaynaa guddida dooroshooyinka qaranka ku adkaysashadooda awooddooda dastuuriga ah ee ay ku muddeeyeen xilli-doorasheedda doorashada madaxtooyada iyada oo ay ku tiirsan tahay hab farsamo.
Bulshada Caalamku waxa ay si joogto ah ugu faraxsan tahay una dhiirrigelinaya in ay maqasho in dhammaan dhinacyada xisbiyadu raaceen xilli-doorasheedda ay cayimeen guddida doorashooyinku. Booqasho dhawaan ay ku yimaaddeen Hargeysa ayay xubno ka tirsan beesha Caalamku kula kulmeen muunad ka tirsan dhinacyada uu go’aanku ka go’o (Madaxwaynaha, xisbiyada oo idil iyo Guurtida) si hoosta looga xariiqo baahida loo qabo is afgarasho siyaasayeed oo sahlaysa dhammaystirka hannaanka diiwaangelinta codbixiyaha iyo hubinta in dhicista doorashada ee june 1, 2016. Wax kasta oo dib u dhac ah, oo aanay keenin sababo farsamo, waxa ay wiiqi doontaa kalsoonida guud iyo tan caalamiga ah ee lagu qabey dimuqraadiyaynta Soomaalilaan.
Bulshada Caalamku waxa ay diyaar u tahay in ay taageerto hannaanka dimuqraadiyaynta Soomaalilaan.
Somaliland: Wasiiru-Dawlaha Waxbarashada Oo Xadhigga Ka Jaray Dhisme Cusub Oo Lagu Soo Kordhiyay Dugsiga Boodhinka Degmada Laas-Geel
Somaliland: Gormeerkii Maanta Ee Madaxweyne Siilaanyo Furitaanki Iyo Dhegax Dhigi M/ Siilaanyo